कोरोना महामारीमा कसरी गर्ने मर्निङ वाक?, अपनाउनैपर्ने १३ उपाय | Kohalpur
कोरोना महामारीमा कसरी गर्ने मर्निङ वाक?, अपनाउनैपर्ने १३ उपाय
Posted by Newsdesk | २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०९:२६
एकातिर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी, अर्कोतर्फ दैनिक जीवन गुजारा चलाउनुपर्ने बाध्यता। कोरोना संक्रमणको भयावह परिस्थितिसँग लड्नको लागि हाम्रो जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन आयो। जबसम्म कोरोना महामारीको रुपमा रहिरहन्छ, तबसम्म दैनिक जीवनमा केही कुरा त्याग्नु, केही कुरा सुधार्नु र केही कुरा थप्नुपर्ने हुन्छ।
कति कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कति कुरा सुधारेर जीवनको गाडी अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कोरोनाबाट बाँच्न जसरी हामीले अनेकौं उपायहरु अबलम्वन गरिरहेका छौं, त्यसैगरी अन्य रोगहरुबाट बच्न पनि विभिन्न सावधानीका उपायहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यतिबेला कोरोना सँगसँगै अन्य रोगसँग पनि लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
हाम्रा दैनिक जीवनका आयाममध्ये प्रात: विचरण, बिहानी र साँझ विचरण, साँझको हिँडाइ ‘मर्निङ वाक र इभिनिङ वाक’ पनि पर्दछन्। मुटुका रोगी, ब्लडप्रेसर, मधुमेह, हृदयघात, मस्तिष्कघात भएका रोगीलाई मर्निङ वाक गर्नु वरदान सावित हुन्छ।
तर, कोरोनाको यस्तो भयावह अवस्थामा घरबाट निस्किनु कसरी, मार्निंङ वाक गर्ने जाने कहाँ? मार्निंङ वाक नजाउँ भने रोग बल्झेला भने पिर, बाहिर हिँड्दा कोरोनाको डर। कतिपय रोगको ओखती जस्तै हो मर्निङ वाक। त्यसैले सावधानिक रुपमा सजगता अपनाएर मर्निङ वाक हिँड्दा राम्रो।
जनकपुर नगरपालिकाका बस्ने कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएका एक पुरुषको मुत्यु भएको छ।
साउन २ गते भर्ना गरिएको र भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गरिएको थियो। उनको साउन ६ गते उनको निधन भएको र पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।
कोरोनाको करह छिट्टै सकिने अवस्था छैन। कोरोनाको यो अवस्थामा अन्य रोग लागेर समयमै औषधि उपचार नपाएर मर्नेको संख्या पनि बढिरहेको पाइन्छ। कोरोनाको डर र त्रासले गर्दा नैराश्यता र चिन्ता बढेर डिप्रेसनका बिरामी समेत बढेका छन्। मर्निङ वाकले हरेक प्रकारका तनाव हटाउन र स्ट्रेस कम गराउन मद्दत गर्छ। त्यसैगरी शरीरमा रक्त सञ्चालन राम्रोसँग गराउने, कोलेस्ट्रोल घटाउने, काम गर्ने स्टामिना बढाउने, मोटोपन घट्ने, शरीरका मांसपेसीलाई बलियो बनाउने, हाड खिइने रोग ओस्टियोपरोसिसको लागि फाइदा हुन्छ। स्तन क्यान्सर हुनबाट रोक्न मद्दत गर्छ। धूमपान, मध्यपान तथा दुर्व्यसनी र कुलतबाट छुटकारा पाउन मद्दत मिल्छ। शरीरमा आवश्यक पर्ने प्राणवायु अक्सिजनको प्रवाह राम्रो गराउँछ।
अंग प्रत्यारोपण गरेका र भर्खर अपरेसन गरेका बिरामीलाई कुनै पनि संक्रमणले छिट्टै समात्ने हुनाले यो समयमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा बृद्धको संख्या धेरै देखिएको हुँदा उनीहरुलाई घरबाट निस्किँदा निकै सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ।
रातभरि सुतेर बिहान उठ्दा शरीरमा ऊर्जा वचत भएको हुन्छ। तर हामीले त्यो ऊर्जालाई अखबार र रेडियोको समाचार सुनेर, बोलेर त्यसै खर्च गर्ने गर्दछौं। बिहान हिँड्दा चुपचाप हिँड्नु राम्रो हो, जसले शरीरमा जम्मा भएको ऊर्जा खेर नजाओस्। बिहानको समयमा हिँड्दा कमसेकम इन्द्रीयहरुको प्रयोग काम गर्नु राम्रो हो। जस्तो आँखाको प्रयोग गर्दा प्रकृतिलाई हेर्ने, मान्छेहरुलाई नहेर्ने। त्यसैगरी कानको प्रयोग गर्दा चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाज, झरनाको कलकल आवाज, रुखका हाँगाबाट पातबाट झरेको, पातमा शीतका थोपा खसेको आवाज सुन्दै हिँड्ने । फिल्मी गीत, लोकगीत, समाचार आदि नसुन्ने।
स्पोर्टस मेडिसिन जर्नलका अनुसार १५ मिनेट हरेक दिन मर्निङ वाक गर्दा आयुमा ३ वर्ष अवधि थपिन्छ। मर्निङ वाक सबै उमेर समूहका महिला-पुरुषको लागि अति उत्तम शारीरिक व्यायाम हो।
हेनरी डेभिड थोरोले भनेका छन्, ‘बिहानको मर्निङ वाक, दिनभरिको लागि आशिर्वाद’ उनका अनुसार दिनभरि शरीरलाई फुर्तिलो राख्न, ताजगी बनाउन र परिश्रम गर्न थप उत्प्रेरणा जनाउने काम बिहानपखको हिँडाइले गर्छ। तर हाम्रो हिँडाइ भने पसलमा तरकारी किन गएको जस्तो हुन भएन। हाम्रो हिँडाइमा एक प्रकारको ध्यान हुनु जरुरी छ।
कतिपय व्यक्तिहरुको गुनासो हुन्छ, मैले ५ महिनादेखि निरन्तर मर्निङ वाक गर्ने गरेको छु तर स्वास्थ्यमा केही सुधार भएन। सुधार नहुनुको प्रमुख कारण त हिँड्ने काइदा नजानेर नै हो। हातमा चुरोट, साथीभाइसँग दुनियाँको कुरा काट्दै, हल्ला गर्दै, हिँडेर कसरी शरीर र मनलाई फाइदा हुन्छ त? यसरी हिँड्दा सिर्फ शरीरमा भएको ऊर्जा नष्ट मात्र हुन्छ। हिंड्नुलाई यदि उपचार पद्दति बनाउने हो भने हिंड्नुका नियम त पालन गर्नैपर्छ। औषधि तितो हुन्छ भनेझै हिंड्ने समय, हिंड्ने कला र हिंड्दा उपनाउनुपर्ने विधिहरुको अबलम्वन त गर्नैपर्छ। अन्यथा हिँडाइको उद्देश्य पूरा हुँदैन।
अन्य व्यक्तिहरु कुराकानी गरेकोतर्फ ध्यान नदिने, सिर्फ आफ्नै लयमा हिँडिरहने। हिँड्दा मनमा कुनै तनाव र चिन्ता लिएर हिंड्नु हुँदैन। सकभर दिमागलाई खाली बनाएर हिंड्ने, सकिँदैन भने सकारात्मक सोच लिएर हिंड्ने।
मर्निङ वाक र इभिनिङ वाक गर्नु जुनसुकै उमेर समूहका रोगी निरोगी सबैलाई साह्रै उत्तम हुन्छ। समग्रमा साँझ-बिहानीको हिँडाइले निरोगी र आयोग्य जीवन जीउन मद्दत गर्दछ। कम्तीमा आधा घण्टा हिंड्नु नै पर्छ। हिँडेर शरीरमा पसिना आउनु पर्ने हुन्छ।
मर्निङ वाक जाँदा अपनाउनुपर्ने उपाय
१. मास्कको उचित प्रयोग- कोरोनाबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अब भनिरहनु नपर्ला। बिहान, दिउँसो वा बेलुका कुनै पनि बेला हिँड्दा मास्कको उचित तबरले प्रयोग गर्नुपर्छ। धुलो, धुवाँ र वातावरण प्रदूषित स्थानमा हिँड्दा जुनसुकै समयमा पनि मास्कको प्रयोग गर्नु राम्रो हो।
२ चुपचाप मौन हिंड्ने- बिहान उठेर मौन हिंड्नु साह्रै उत्तम हुन्छ। विस्तारै हिंड्न सुरु गरेर लमकलमक पाइला छिटोछिटो चाल्दै जाँदा शरीरभित्र एक प्रकारको ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। पसिनाको गन्ध र शरीर भित्र भइरहेको परिवर्तनलाई लामो श्वास लिँदै आँखा चिम्लेर महसुस गर्दै एकैछिन विश्राम लिनु राम्रो हुन्छ। थाकेर चुर भइयो भने नाकबाट लामो श्वास तान्ने र मुखबाट फ्याक्ने गर्नुपर्छ। लामोलामो श्वास लिँदा पनि मास्क खोल्नु पर्छ। तर अन्य व्यक्ति हिँडिरहेको ठाउँमा मास्क खोल्नु हुँदैन। अरु कोही नभएको एकान्त ठाउँमा गएर मास्क फुकाल्ने गर्नुपर्छ।
३. भीडभाडमा नहिंड्ने- अहिलेको कोरोनाको अवस्थामा संक्रमणबाट बच्नको लागि शरीरमा रोगप्ररोधात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ। बिहानीको हिँडाइले शरीरमा इम्युनिटी पावर थप्ने काम गर्दछ। बिहान हिँड्दा थप सजग हुनुपर्ने छ किनकी बढ्दो सहरीकरणले गर्दा हिंड्न मिल्ने सार्वजनिक ठाउँ सीमित छन्। हिंड्ने व्यक्तिहरु असीमित हुन सक्छन किनकी वर्तमानको खानपान र जीवनशैलीले सबैलाई दिन प्रतिदिन रोग थपिरहेको छ। त्यसैले अहिले कोरोनासँग बचेर हिंड्नको लागि भीडभाड नभएको, साह्रै कम मान्छेहरु हिंड्ने स्थानमा हिँड्नु पर्छ।
४. सामाजिक दूरी- कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै एक मिटरको सामाजिक-भौतिक दूरी कायम गरौं भन्ने सन्देश जारी गरेको छ। छिटोछिटो हिँड्दा श्वास लिने काम पनि छिटोछिटो नै भइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मास्क समेत खोलेर श्वास फेर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम राख्नु नितान्त जरुरी छ।
५. समूहमा नहिंड्ने- मर्निङ वाक गर्दा साथीभाइसँग जिस्केर, गफिएर हिंड्नु त्यसै पनि राम्रो होइन। त्यसैमाथि यो कोरोनाको कहरमा त झन समूहमा हिंड्नै हुँदैन। कोरोना भाइरस ड्रपलेटको रुपमा हावामा निकै बेर तैरिएर बसेका हुन्छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइसकेको अस्वथामा समूहमा हिंड्नु भनेको कोरोनालाई स्वागत गरे सरह हुन्छ। कुनै एक जना संक्रमित छ भने अरु सबैमा सर्ने सम्भावना हुन्छ।
६. हिंड्ने ठाउँको छनोट- वर्तमान अवस्थामा जथाभावी हिँडडुल गर्नु कदापि राम्रो होइन। कोरोना संक्रमणबाट बचाउन सरकारले लकडाउन समेत गरेको अवस्थामा हिंड्नको लागि उचित स्थान छनोट गर्नुपर्छ। कुनै ठाउँ नपाइएको अवस्थामा घरको सिंढीमा थुप्रै पटक तलमाथि पनि गर्न सकिन्छ। तर हिंड्न पाइने अवस्था छ भने एकान्त ठाउँ र कम मान्छेहरु हिँडडुल गर्ने ठाउँ रोज्नुपर्छ। अहिले कोरोना मात्र होइन, बाढीपहिरोको समेत भयावह अवस्था रहेको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हिंड्ने ठाउँ छनोट गर्दा ध्यान दिनु जरुरी छ। खोला नालाको किनार, भिर-पहाड जस्ता ठाउँमा हिंड्नु हुँदैन। निकै एकान्त ठाउँमा पनि हिंड्नु भएन। कम्तीमा केही बितल पर्‍यो भने आकस्मिक दुर्घटना भयो भने तुरुन्त उद्धार हुन सक्ने ठाउँमा हिंड्नु पर्छ।
७. कपडाको छनोट- मर्निङ वाक जाँदा मौसम अनुसार सजिलो हल्का तर शरीर पूरै ढाकिने कपडा लगाउन उपयुक्त हुन्छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि सिल्की चिप्लो कपडाहरु प्रयोग गर्दा उत्तम हुन्छ। हल्का ज्याकेट लगाउँदा राम्रो हुन्छ। लामो बाउला भएको सकभर शरीरका सबै आङ ढाक्ने कपडाको प्रयोग गर्‍यौं भने भाइरस सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। कोरोनाको महामारी नै भएर गाउँसहरभरि समुदायमा सक्रमण फैलिएको अवस्थामा नहिँडी नहुने भयो भने मास्कको साथै अनुहार छोप्ने भाइजर समेत प्रयोग गर्नुपर्छ।
८. हेडफोनको प्रयोग नगर्ने- कानमा हेडफोन कोची हिँड्दा पछाडिबाट कुनै हिंस्रक जनावर वा कुनै समूह आउँदै छ कि भन्ने समेत थाहा हुँदैन। आजको कोरोनामय समयमा हाम्रो अगाडि-पछाडि कस्तो मान्छे आउँदै छ भन्ने कुराको जानकारी लिनु पनि कोरोनाबाट बच्ने एक उपाय भित्रै पर्छ। मर्निङ वाकलाई रमाइलो र निरन्तरता दिने उद्देश्यले कानमा इयरफोनको डल्ला कोचेर गीत सुन्दै हिंड्नेहरु धेरै हुन्छन्। तर शारीरिक तथा मानसिक दुवै तबरले कानमा हेडफोन खोचेर हिंड्नु राम्रो मानिँदैन। त्यसै पनि हाम्रो भित्री कानमा भेस्टिबुलर सिस्टम रहेको हुन्छ, जसको काम ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ। भित्री कानमा खराबी भयो भने हिँड्दाहिँड्दै चक्कर लाग्ने, ढल्ने हुन्छ। हेडफोनको चर्को म्युजिकले कहिलेकाहीं भेस्टिबुलर सिस्टममा हानि पुर्‍याउन सक्छ। हिँड्दा गीत-संगीत सुन्नाले मौन हिंड्न अवरोध हुन्छ। गीतका शब्दले दिमागमा अनेकौ तर्कनाहरु उब्जाउने गर्छ। जसले गर्दा हिँडाइको ध्यान भंग हुन्छ।
९. रेडियो नसुन्ने, अखबार नपढ्ने- यस कोरोनामय अवस्थामा हिँड्दा रेडियो, एफएम तथा अखबार पढ्दै र सुन्दै हिंड्नु हुँदैन। प्रायजसो मर्निङ वाक गर्दा धेरैले रेडियोमा समाचार सुन्दै हिंडेको पाइन्छ जुन बिल्कुल गलत अभ्यास हो। हिँडाइको अर्थपूर्ण उद्देश्य पूरा गर्नु छ भने मौन हिँडाइ नै उपयुक्त हुन्छ। सामाचार सुन्दै हिँड्दा सिर्फ हाम्रो खुट्टा मात्रै हिँडेको हुन्छ, मन र मष्तिस्क कताकता भौंतारिइरहेको हुन्छ। लडाईं, झगडा, तनाव जस्ता नकारात्मक कुरा नै समाचारका प्रमुख विषय हुने गर्दछन्। अहिलेको अवस्थामा कोरोनाले यति मरे र उति मरे, बाढी र पहिरोले यति घर बगायो भन्ने नै प्रमुख समाचार बन्ने गरेका छन्। यस्तै समाचार पढेर हेरेर, सुनेर मानसिक बिरामी बढेका छन्। थुप्रैले आत्महत्या समेत गरिसके। फेरि हामी तिनै समाचार सुन्दै मर्निङ वाक गर्दा के चाहिँ उपलब्धि होला र?
१०. धूमपान, मद्यपान नगर्ने- मर्निङ वाकमा कहिले पनि धूमपान गर्नु हुँदैन। झन् कोरोनाको यस माहोलमा त गर्नै हुँदैन। किनकि कोरोना भाइरसले सबैभन्दा पहिले असर गर्ने भनेकै फोक्सोमा हो। धूमपानले फोक्सो खराब गर्छ। फोक्सो कमजोर भएको अवस्थामा भाइरस सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। मास्कलाई तल चिउँडोमा सारेर धूमपान गर्दा मास्क समेत प्रदूषित भइरहेको हुन्छ। साथै वरिपरिको वातवरण प्रदूषित भई हिँड्नेलाई समेत असर गर्छ। सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्नु भनेको असभ्य नागरिक बन्नु हो।
११. खानपानमा ध्यान- सामान्यतया: मर्निङ वाक हिँड्न सुरु गरेपछि खानपान र जीवनशैलीमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ। कोरोनाको अवस्थामा खानापानमाथि ध्यान दिन झन् धेरै जरुरी हुन्छ। खानामा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने तत्वहरु भएको खाना खानु पर्नेहुन्छ। जस्तै: हरियो सागपात, फ्रेस जुस पिउनु र पोषिलो खाना राम्रो हुन्छ। दूधमा अलिकति बेसार राखेर सुत्ने बेलामा पिउँदा राम्रो हुन्छ। राति अबेरसम्म नबस्ने, ठिक समयमा सुत्नुपर्छ। आफ्नो रोगको प्रकृति अनुसार खानामा सबै प्रकारको खनिज तत्व पाइने खाना खानु पर्छ। हिँडेर फर्केपछि दुई गिलास मनतातो पानी पिउनु राम्रो हुन्छ।
१२. जनावरको साथमा नहिँडौ- मर्निङ वाक जाँदा कुकुर पनि सँगै लिएर हिंड्नेहरु धेरै देखिन्छन्। कोरोनासँग बचेर मार्निंङ वाक गर्दा नितान्त एक्लै हिँड्नु पर्छ। जनवारसँगै हिँड्दा हाम्रो ध्यान हिँड्नमा कम त्यो जनावरको रेखदेखमा धेरै हुन्छ। जसले गर्दा हिँड्नुको कुनै उद्देश्य नै पूरा हुँदैन।
१३. नुहाउने तरिका- मर्निङ वाक गरिसकेपछि नुहाउनु अनिवार्य मानिन्छ। पसिनाको गन्धलाई हटाउन पनि नुहाउनुपर्ने हुन्छ। मर्निङ वाकबाट फर्केर सिधै बाथरुममा गएर सावरमा थापिनु राम्रो हुँदैन। केहीबेर बसेर, पसिना ओभाइसकेपछि नुहाउनु पर्छ। कोरोनाको यो अवस्थामा राम्रोसँग साबुनपानीले सम्पूर्ण शरीर नुहाएर मात्र घरभित्र पस्नु राम्रो हुन्छ।
यद्यपि, दम रोग तथा श्वासप्रश्वासका दीर्घरोगीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि जटिल अवस्था सिर्जना हुने भएकोले यस्ता रोगीहरुले बाहिर हिंड्नु राम्रो मानिँदैन। आफू अस्वस्थ भएको महसुस भएमा तथा शरीरको तापक्रम बढेको बेला मर्निङ वाक गर्नु हुँदैन।
Previousमिर्गौलाका बिरामीको निःशुल्क कोरोना बीमा
Nextगौतमबुद्ध विमानस्थलको ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार २१:२९
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार २१:२४
२७ भाद्र २०७७, शनिबार १८:४६